Nhanganyaya ye "Iyo iripo-Exile" yaGrobli Zirignon naSery Bailly - Afrikhepri Fondation
Sumo kuna Grobli Zirignon's "Kuvepo-kutapwa" naSery Bailly
Kuverenga: 12 mins
Usumo ishoko rinoperekedza rimwe. Kuperekedza hakusi kwekutanga parwendo, ndiko kuti kutaura tenzi wayo uye kwairi kuenda. Isu tinotora chirongwa cheuyo watinotsigira.
Wokupedzisira kumirayiro minomwe yemunyori weGhanaian Ayi Kwei Amah varapi vanorapa kuremekedza vakuru.Varapi 1978 p.96). Densu wechidiki anobvunza tenzi wake wekutanga Damfo kana chete ivo vachifanirwa kuremekedzwa. Vokupedzisira vakangoseka. Kana tichiziva kuremekedza hapana chikonzero chekuti usazviite kune wese munhu.
Sei ndisingabvumire kuperekedza mukuru, Grobli Zirignon, ndichiziva kuti kutakura zvinhu zvake, chiito chake uye chirevo chaanotakura, zvinondipfumisa pachangu? Chokwadi, kuperekedza kuve chikamu cherwendo rwako pachako kana kuchizvigadzirira. Saka ini ndiri mukubatana nerwendo urwu, nechishuwo ichi umo mudetembi wepfungwa anotibatanidza.
VIVIRIYO yerwendo urwu ishoko rekuti nostalgia. Rwendo rwese, zvirokwazvo, rwunokonzera kusuwa kweavo vanobva kana vanokusiya uye vanoda kuona zvakare, iwo iwo ezvibodzwa izvo isu zvatakarasikirwa uye tinoda kuwana.
Nostalgia ndicho chinhu chakanaka. Iko kutanga kuenzanisa, kuziva kuti tatama kubva kumusha kwake wekwaamai. Iko iko kushuvira, iko kwekutsvaga mai vacho uye kuyananiswa pamwe nehunhu hwekubereka uye nerupo izvo zvavanobatanidza nekutakura.
Ndivo vezvepfungwa vanotiudza kuti zvinopesana neyakagutsikana iyo inoisa iwo midzimu kuti arare, kunyanya iya yevagari, chishuwo ndechekupidigura uye haambozviisi pasi pekuzviisa pasi.
Ini saka ndinonzwisisa, kutanga kwezvose, nei chinyorwa ichi chakakumikidzwa kune edu ekupedzisira Sarata Ottro-Touré.
Kana munyori akarwisa pasi, uyu "Mukuru Anodya" (71), sevachemi vedu vechivanhu, zvinotanga kuve zvekubvarura Sarata Ottro-Touré kubva kwatiri.
Iyo inomiririra makadinali tsika senge runako, hunyanzvi uye kuzvipira. Tinogona kutaura, nemunyori, kuti hanzvadzi yedu nemuroora wedu vakasiya "mukuwasha".
Kana kuvapo-kusavapo ndiko kukosha kweiyo iripo »(24) sekureva kwemunyori, hatigone here kuti kusavapo-kuvepo ndiko kukosha kweasipo, kana iko kwekupedzisira chiri chinhu chekufunga?
Mafomura akati wandei akafemerwa akasangana naye mumuedzo taura nezvake, mutaurire iye. Ngatirangarirei zvikamu zvitatu.
"Iyo iripo haina basa chete
anobvunzawo kuti azive
zvakaitika kune avo
uye kana iye achavaonazve rimwe zuva? "
murume mushure mekufa kwake
Kukosha kwemabasa ake
Hapana anosiya chero chinhu
vakatongerwa kuparadzwa ”. (101)
"Kuvapo kuzvidya wega."
sekenduru ”. (144)
Saka zvinoita kuti tigumise kuti Sarata Ottro-Toure haana kudzoka kumba asina kuzadzisa chinangwa chake apa pazasi. Ndinogona kuzvipupurira, anga agara achidana kuti " kirasi ". Angangodaro akatenda kuti kwaive kurangarira iyo Union Syndicale des Etudiants uye Vadzidzi veCôte d'Ivoire (USEECI) uye " uto rakamanikidzwa »MuSéguéla-Bouaké. Asi aigara aine kirasi!
Uye, sekenduru yakamutswa naGrobli, akazvipisa moto mushure mekuvhenekera uye nekudziya nyika yedu. Uku kusuwa chiratidzo chechimwe chakanyanya kukura.
Nostalgia yeiyo mbiri yakatanga Noun naKemt
Semagariro ese ekuzvarwa patsva, tinoda nyaya inotidzoreredza uye kuyananisa isu nemoyo yedu, iyo inowana uye inoita kuti zvido zvedu zviitike. Hatidi kuva mhepo vane mhepo inotenderera nemhepo yavo yekuMadokero neEast, mapipi asingazive kwaanobva kana kwavari kuenda.
Nostalgia ndiko kuziva kwehutapwa dot unotaura kwatiri munyori. Nounu inzvimbo yekuberekesa yatakasiya. Kemt, iyo nguva yekare kubva kwatakarumurwa.
Anofara kuti mushure meObenga, Armah nevamwe, Grobli Zirignon anoperekedza Cheick Anta Diop munzira yekudzoka kukuru pachezvake.
Kemt chiratidzo uye chishandiso chekuvakazve nhoroondo yedu nechinangwa chekutora, ndiko kuti, kuzviita zvakasiyana uye kwete kuzviburitsa zvakare, ndangariro yaNoun inotibatsira kurwisa kupukuta kwedu uye kusagadzikana kwedu uye Bos kutichengetedza utsvene nedzimwe nzira dzekuparadzwa.
Nostalgia yehuni dzinoera
Mukutapwa kwedu kunotambudzwa, tinorangarira chinoita nzvimbo yedu yegiravhiti, senharaunda uye sevanhu vamwe nevamwe. Ehe, munyori anomutsa matiri chishuvo chehunhu hunoratidzwa nehuni dzinoyera, ino nzvimbo yatinodzidza kuve nyanzvi pedu, kure nekupopota uye hasha dzechisimba, vapanduki uye vanocheka nzira, kubva pakuchiva uye kukara, kure nemhirizhonga isina chena.
Iri huni dzinoyera nhasi ndidzo dziri kure kwazvo dhezheni uye kudzikisira kweanokunda kukunda kwepasirese iyo inoramba zvese totem.
Kufungidzira uku kana kuti chishuwo chesimba rose chakashorwa nemunyori uyu chinotitungamira kuti tive “cosmophages” (H. Memel Foté) pachinzvimbo chekuva “varimi venyika” (170). Nyanduri anoti:
"Munhu akafanana neshiri
kuzorora pabazi rinowira.
anoshamisika kana pasi
haasi kuzopunzika ”(75)
Isu tinokanganwa nekusaziva kuti shiri, nekukudza zvakawandisa mafuta ezvido zvedu zvese, ichavhuna dondo nekukonzera kuparara kwepasi.
Grobli Zirignon anotiyambira pamusoro pezvose izvi zvinotityisidzira, kana tisingade kuita kuti hutapwa hwedu huwedzere uye tizviparadze. Anozvipindurira pakati penjodzi idzi nesu nenhetembo yake yefilosofi, nemusiki wake uye chirevo chechimiro Kupokana neyakajairika concupiscence: yekufananidzira castration, kupokana zvisina musoro mhirizhonga: mutemo waBaba uye kupesana chena kupatsanura: chirevo chekuyananisa!
Nostalgia yemureri wechirevo
Zvisinei nekuonekwa, iyi inhetembo!
Munyori anogadza hutongi nekutaura kuti uzivi mukunda wenhetembo. Chero ani anoti nhetembo dzinotaura nezve chirevo chinoshandisa mifananidzo inokatyamadza, chichibatanidza chisina kuburitswa, kunze kwemadrama nhetembo.
Paanotaura nezve boxer "Rangi." "Yakadzika (105), ini ndinonzwa muAfrica-America muzivi Comel West vaona kuti Mohamed Ali akakwanisa kuwira pasi nenyasha. Kana abvisa murume aripo "Pamusoro pe izvozvo Uye inofananidza kuvapo kwayo ne " musika webenzi '(114)kutaura kwacho kunoratidzika kunge kwakajairika.
Asi chirevo hachisi, kure nazvo. Musika unoreva mari, iyi " )Sokutaura kunoita Grobli kumwe kunhu, uye kururamisa kusarudzika kwemubatsiro pamusoro pevanhu (N. Chomsky, Pundutso pamusoro peVanhu, 1999). Kwenguva yakareba tange tichitsvaga nzira dzekuzviisa pamusoro pemusika. Iye ndiye, pane zvinopesana, anoramba ari pamusoro pedu mune mafomu ari akawedzera kuwanda uye ari kure nebasa rinobudirira.
Isu tinoona zvakare nyanduri achitamba parufu sedimikira uye seicho chokwadi:
"Tamba wakafa pakatarisana nenjodzi!" "(154)
"Kufa kuri mumweya ndiko kunovapo anodzidza kuti anofa" (114).
Chiito chinouya kuzadza chisheji uye kupindira pakati pevaya vanoda kusundirwa. Anopesana nechisimba uye rufu kubatana nerunyararo, kugovana uye hupenyu (Ankh). Iye isimba rinosimudzira uye rinomutsa. Iye ndiye chaiye"Tariro yevanhu." "(179). Nekudaro kufarira kurapa kwehunyanzvi uko Grobli inopa kune vanotambura vanhu mukutsvaga kurapwa. Inovavarira kudzima zviri zvepamusoro, zvechimbichimbi uye zvisina chokwadi matiri kuti tiwane pfungwa, kudzoka kwatiri mushure mekuora kwakagara kwenguva refu. Kubudikidza nekuparadzwa kuri pachena tichakwanisa kuzvivaka patsva.
Kukoka kuti udzoke
Zvisinei nezvinoratidzika sekusava netariro, munyori haatikumbire kuti tigare pasi tongotenderedza maziso edu. Kana izwi renhetembo rikati " Kuvapo ndiro gamba chairo " (172), imhaka yekuti ari kuda kutikurudzira kuti isu kuve vamwari-vamwari vanokwanisa kutora izvo zvavanotora mumaoko.
Heino izwi rinotikoka kuti tidzokere kuNun, kwatiri. Sarata Ottro-Touré aive mugari wenhaka waDo-Kamissa. Zviri kwatiri kutevera mumakwara eS Soundjata uye ese magamba enhoroondo yedu yakakanganwa. Zviri kwatiri kuita kuti hupenyu hwedu huenderere mberi panzvimbo yekufamba-famba mumatenderedzwa kunge kumusoro (140). Ngatitorei danho uye chiito kupfuudza kubva pachinzvimbo chekurarama wakafa kuenda kune wekurarama (128). Zviri kwatiri kuona kuti hupenyu hwedu hauna kuganhurirwa padanho rekuvapo. Ankh inofanira kupembererwa!
Pano pane kuedza kunzwisisa zvinorehwa nekuvapo kwedu kuti tizive kuti toga kuti titungamire kupi. Zviri kwatiri kuti tirambe tichifunga izvozvi, uye mune zvese zvatinoita, izvo "Rufu mukova wekusingaperi." (145) Ehe, kana tichiziva kutora iyi ndima uye nekuvhura iwo musuwo.
Ndakawanazve iyo Scarab kubva kumafirimu aDavid Carradine atakayemura tisinganyatso kuziva uye ini ndikawana mune kwese kudzama, zvinoreva chiratidzo ichi: kugadzira kunyangwe nemarara!
Haisi nyaya yekusungira saUlysses kune chero mast kuti arambe kudanwa kwaNoun kana kuchema kana uchitsvaga mai vacho. Iyo inyaya yehana uye kuzvipira kutarisana neR uye vese Madzibaba naVakuru veNyika, kuramba kurwadziwa kwese kurambidzwa uye zvese zvakavanzika, kushaya hope dzose.
Rega munhu wese apinde zvakadzika mune iyi nhetembo yefilosofi. Anozodzoka kune yakadzika denser, yakawanda Africa, murume wanda. Zvese zvishuwo chirongwa chekufamba. Kuverenga kunofadza uye rombo rakanaka kwatiri tese.
Purofesa Séry Bailly- National University yeAbidjan
Dzidzo - Amai (PDF)
How Capitalism Yakagwinya Ecology - Rugwaro (2019)
Sayenzi yemidzimu - Rudolf Steiner (PDF)
Iyo DJOLOF EMPIRE
Tarisa Shaka Zulu Series (1987)